ထိုင်းငါးခူမွကြော်သုပ် | Wutyee Food House
« ကင်းမွန်တန်ပူရာ ရွရွလေး
၀က်သား ပေါက်စီ အိအိလေး »
March 21, 2010 by chowutyee ထိုင်းငါးခူမွကြော်သုပ်
၂။ သီဟိုစေ့ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း
၃။ သရက်သီးစိမ်း (အချဉ်) – ၁လုံး (ပေါက်ပေးပါ)
၄။ ကြက်သွန်နီ – ၂လုံး (ပါးပါးလှီးပေးပါ)
၅။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၂စည်း (ပါးပါးလှီးပေးပါ)
၆။ ငရုတ်သီးစိမ်း – ၄ခု (ပါးပါးလှီးပေးပါ)
၁။ သကြား – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၂။ ငါးငံပြာရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၃။ သံပရာရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း
၁။ သကြား၊ ငါးငံပြာရည်၊ သံရာရည် အားလုံးကို ခွက်တစ်ခုထဲထည့် ရောမွှေလိုက်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ဒယ်ထဲ ရောမွှေထားသော သကြား၊ ငါးငံပြာရည်၊ သံပရာ၇ည် တို့ကို မီးနည်းနည်းဖြင့် စက္ကန့်၂၀ခန့် တည်ထားပေးပါ။
၃။ ပြီးလျှင် ဆော့အရည်ကို ခွက်တစ်ခုထဲထည့်ထားပေးပါ။
၁။ ငါးခူကို မီးကင်ပေးပြီး ခဏအခြောက်ခံထားပါ။
၂။ ပြီးမှ ငါးခူအရေခွံကို ဖယ်ပြီး အသားများကို ခရင်းဖြင့် မွ၍နွင်းပေးပါ။ အရိုးမပါပါစေနှင့်။
၃။ မွထားသော ငါးခူများကို ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း) ထည့်ရောမွှေပေးပါ။
၄။ ပြီးလျှင် ဒယ်ထဲ ဆီများများထည့်ပြီး မွထားသော ငါးခူများကို နည်းနည်းစီခွဲပြီး ၄ခါ အညှိရောင်သန်းလာသည် အထိ ကြော်ပေးပါ။
၅။ ကြော်ပြီးလျှင် ဇကာဖြင့် ဆီပြန်စစ်ထားပေးပြီး ပန်းကန်ပြားတစ်ခုထဲ ထည့်ထားပေးပါ။
၆။ ပြီးလျှင် သီဟိုစေ့များကို ဒယ်ထဲ ထည့်ပြီး အညှိရောင်သန်းလာသည် အထိကြော်ပေးပါ။
၇။ ကြော်ပြီးလျှင် ပန်းကန်တစ်ခုထဲသို့ ကြော်ထားသော ငါးခူ၊ သီဟိုစေ့၊ (ပေါက်ထားသော) သရက်သီး၊ (ပါးပါးလှီးထားသော) ကြက်သွန်နီ၊ (ပါးပါးလှီးထားသော) ငရုတ်သီးစိမ်း၊ (ပါးပါးလှီးထားသော) ကြက်သွန်မြိတ် ထည့်ပါ။
၈။ ထို့နောက် အပေါ်မှ ဆော့အရည်ကို ဆမ်းပေးပြီး အားလုံးကို ရောမွှေလိုက်ပါ။
၉။ ထိုင်းစတိုင် ငါးခူမွကြော်သုပ်ကို မြိန်ရှပ်စွာ စားသုံးနိုင်ပါပြီး….
on March 21, 2010 at 9:19 pm | Reply တေားသား
ကျွန်တော် Italian Food ချက်တဲ.ဆရာကြီးမဟုတ်ရပါဘူးဗျာ ပညာသင်နေတဲ.အဆင်.ပါ ဟင်းတွေပတ်သက်လာရင် ဘယ်လိုအစားစာမျိုးကိုမဆို လေ.လာပါတယ် အခုလို ဟင်းတွေကိုဘယ်လိုချက်ရမယ် ဘာတွေပါဝင်တယ် ချက်ပြုတ်ချိန် ဘယ်လောက်တော.ကြာမယ် ဆိုတာတွေကို လေလာနေတဲ. ပညာရှာနေတဲ.တေားသားပါ ။ အတန်းပညာ ကိုမသင်ခဲ.ရလို. ၅ တန်းနဲ.ကျောင်းထွက်ခဲ.ရပြီး အတတ်ပညာရှာတဲ.အချိန်မှာ Chef တစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်လို. အစားအစာမျိုးစုံကို လေ.လာနေတဲ.သူပါ ။ အမှားပါခဲ.ရင်လဲး တောင်းပန်ပါတယ် ။ နိုင်ငံများစွာရဲ. အစားစာတွေကတော. ၀ါသနာပါသူတွေအတွက်လေ.လာသင်.တဲ.နေရာလေးတစ်ခုမလို. အခုလိုဝင်ရောက်လေ.လာတာပါ ။ အချိန်ရရင်တော.နေတိုင်းလာဖတ်ပါမယ် ။ တင်သမျှ ရေးသမျှတွေကို မှတ်သားထားမှာပါ ။ ဆရာကြီးလဲးမဟုတ်ရပါ ဆရာလေးလဲးမဟုတ်ပါ ပညာသင်လေးပါ ပန်ကန်ဆေးလေးပါ ။
on March 22, 2010 at 3:28 am | Reply chowutyee
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ.. ခုလို လာအားပေးလို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်…🙂
on March 21, 2010 at 11:42 pm | Reply leo
မ၀တ်ရည်..ဆောရီးဗျာ..ကျွန်တော့် ဆရာက နည်းနည်း ဟိုဒင်း…. ဖြစ်နေလို့..ဟီးးး
စကားပြော မတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ဆရာလေးကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျာ။
No problem leo!!!😉
on March 22, 2010 at 2:09 am | Reply နွေးနေခြည်
ဒီမှာ ငါးခူမတွေ့ဘူးဟ.. မြန်မာဆိုင်မှာတော့ ရှိတယ်.. ရေခဲရိုက်ထားတား(
on March 22, 2010 at 3:29 am | Reply chowutyee
နေခြည် ငါးခူမရရင် ငါးကြင်းနဲ့ လုပ်ကြည့်ပါ့လား.. ငါတော့ ငါးကြင်းနဲ့ မလုပ်ဖူးဘူး.. ဒါပေမယ့် ငါးကြင်းနဲ့ဆို အသားပိုများများရမယ်၊ အရသာလည်း သိပ်မကွာဘူးထင်တယ်..🙂
on March 22, 2010 at 1:18 pm | Reply hmone
it is really my favourite dishes…..yummy
on March 23, 2010 at 7:09 am | Reply chowutyee
ကိုယ်လုပ်စားပါ့လား.. ထိုင်းဆိုင်က အတိုင်းပဲလုပ်ထားတာ..း)
on March 23, 2010 at 10:53 am Hmone Gyi
I THINK it will be better if u put “kyawe kaw thi”
on March 22, 2010 at 7:03 pm | Reply Moe Thaike
အရမ်းကြိုက်သွားပြီ။ ညီမလေးကရုပ်ကလဲချော၊ အချက်အပြုတ်လဲတော်လိုက်တာ။
အမတို့ကအရှေ့တိုင်းအစားစာပိုကြိုက်တယ်၊ ချက်နည်းတွေထပ်တင်ပါအုံး။ အားပေးနေတယ်နော်။ညီမလေးနည်းတွေအတိုင်းချက်ကြည့်ရအုံးမယ်။
on March 23, 2010 at 7:16 am | Reply chowutyee
ကျေးဇူးပါပဲ မမိုးရယ်… မမိုးမြှောက်ပြောလို့ ဘယ်လိုနေရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး.. ဟီးဟီး… နောက်လည်း ချက်နည်းတွေ တိုးတိုးတင်ဖို့ရှိပါတယ်.. အမြဲလည်း လာပြီး အားပေးပါအုန်းနော်…း)
on June 24, 2010 at 8:10 am | Reply ThiThiAung
အမရေ အခုနည်းကို ကြိုက်ပါတယ် တစ်ခုလောက်သိချင်လို့ပါ သရက်သီးမရှိရင် ဘာနဲ့လုပ်ရမလည်းသိချင်လို့ပါ
on June 24, 2010 at 9:53 am | Reply chowutyee
သီသီအောင်ရေ သရက်သီးမပါလည်း ငါးခူမွကြော်သုတ်စားလို့ ကောင်းပါတယ်… သရက်သီးပါတော့ ငါးခူမွကြော်သုတ်က ပိုများတယ် ထင်ရတာပေါ့၊ ပိုလည်း စားကောင်းတာပေါ့လေ။ မထည့်လည်း ရပါတယ်..🙂
on June 24, 2010 at 8:23 am | Reply ThiThiAung
အမရေထပ်မေးရအုံးမယ် ငါးကိုအစိမ်းကင်ရမှာလား ပြုတ်ပြီးမှကင်ရမှာလားဆိုတာလေးပါထပ်သိချင်လို့နော်
on June 24, 2010 at 9:54 am | Reply chowutyee
ငါးခူးကို အစိမ်းကင်တာပါ… ကျက်သွားမှ အသားနွင်းရတာပါ…😉
on June 30, 2010 at 3:12 am | Reply THITHIAUNG
on June 30, 2010 at 8:25 am | Reply chowutyee
မေးပါနော်… ၀တ်ရည် သိရင် အားလုံး ပြောပြပေးပါ့မယ်..🙂
on August 30, 2010 at 7:26 pm | Reply Mein Mein
What kind of sauce do we need to use?
on August 31, 2010 at 4:11 am | Reply chowutyee
Mein Mein ရေဆော့ ချက်နည်း အပေါ်မှာ ရေးထားပါတယ်… ဆော့ အရင်ချက်ပြီမှ ငါးခူမွကြော်အတွက် ပြင်ဆင်ရမှာပါ… အောက်မှာ ပြန်ကူရေးပေးလိုက်ပါတယ်နော်
၁။ သကြား(စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း)၊ ငါးငံပြာရည်(စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း)၊ သံရာရည်(စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း) အားလုံးကို ခွက်တစ်ခုထဲထည့် ရောမွှေလိုက်ပါ။
on October 15, 2010 at 2:34 am | Reply may aye
on October 15, 2010 at 3:37 am | Reply chowutyee
You r so welcome par!!:)
on May 14, 2012 at 2:02 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] March 21, 2010 ထိုင်းငါးခူမွကြော်သုပ် […]